Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Dhalinyrada iyo Arday S.Ogadenia ee dalka Finland oo isugu yimid shir
Ururka Dhalinyrada iyo Arday S.Ogadenia ee dalka Finland oo isugu yimid shir
Posted by ONA Admin	/ January 27, 2013
Ururka OYSU laantiisa Finland ayaa maanta oy taariikhdu tahay 26.01.2013 waxay isugu yimaadeen shir hawleed oo abaarihii 3:00 galabnimo u furmay. Shirkaas dhlainyarada ayaa ka furmay hool weyn oo ku yaala badhtamaha magaalada Helsinki, iyadoo dhalinyaradu ay isaga kala yimaadeen dhamaan gobolada dalkan.
Aayado qur’aan iyo wacdi diiini oo uu soo jeediyey sheek Saalax kadib ayaa laguda galay muhiimadii laysugu yimid. Xoghaya ururka mudane Yuussuf ayaa shirka furay kana warbixiyey ujeedada iyo muhiimada uu shirku leeyahay. Shirkan oo ahaa mid si waagsan loosoo agaasimay in badana laga soo shaqeeyey ayaa waxaa meesha ka baxay seminaaro kala duwan warbixino gudo iyo dibadba leh sidookale waxay maamulkka ururku soo bandhigeed qorshesanadeedka ugaarka ah urur hoosaadka oysu finland ee sanadkan 2013.
Waxaa aan meesha ka maqnayn qudbadihii masuuliyiinta JWXO iyo jaaliyada Somaalida Ogadeniya ee dalkan finland sida gudoomiya jaliyad mudane Xasan Kamaal. Waxaa iyana xusid mudan in habka is gaadhsiinta shirka kaga soo qayb galay Mudane Riyaale Xaamud oo dhalinyarada warbixin kasiiyey kobtuu marayo halganku gude iyo dibadba sidookale mudanuhu wuxuu ku dheeraaday guubaabinta dhalinyarad iyo meesha ay higsanayaa inay yihiin hogaankii mustaqbalka.
Shirka ayaa kusoo gabagaboobey jawi wanaagsan oo aad u qurux badan galabta abaarihii 8:00 fidnimo